Kung Fu Panda2(2011) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2011 90 min Animation
IMDB: 7.2/10 224,020 votes
Kung Fu Panda2မှာတော့ ‘ပို’ ရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျးကို ကွညျ့ရှုရမှာပါ…. ‘ပို’ ရဲ့အဖဖွေဈသူဟာ မှေးစားအဖဖွေဈနပေါတယျ… ‘
ပို’ လသားအရှယျမှာ သူတို့ရဲ့ရှာလေးကို တပျဖှဲ့တဈခုက ဝငျရောကျတိုကျခိုကျဖကျြစီးတာကို ခံလိုကျရပါတယျ…
ပို ရဲ့မိဘတှဟော ထှကျပွေးရငျးနဲ့ ပို့ ကို စှနျ့ပဈခဲ့ရပါတော့တယျ…ဒါက ပို ရဲ့ ဘသ ဇာတျကွောငျးပါ…
အခုခြိနျမှာတော့ ဒေါငျးမငျးသားတဈယောကျဟာ လကျနကျဆနျးတဈခုကို တီထှငျပွီးတော့ တရုတျပွညျကွီးကို သိမျးပိုကျဖို့ ကွံစညျနပေါပွီ…
ဒါကို ပို နဲ့ သူ့အဖှဲ့က တားဆီးဖို့အတှကျ တာဝနျကလြာပါပွီ…ဒီတော့ ပို တို့တှေ ဒေါငျးမငျးသားကို ဘယျလိုတားဆီးကွမှာလဲ ဘာတှဆေကျဖွဈကွဦးမလဲ
ဆိုတာကိုတော့ ထုံးစံအတိုငျး ကွညျ့ရှုခံစားပေးကွပါဦး grin emoticon
ဒီဇာတျကားဟာလညျး ပထမကားလိုပဲ rating ကောငျးကောငျးရထားတဲ့ကားတဈကားဖွဈပါတယျ (IMDb rating 7.3/10 )
Kung Fu Panda2မှာတော့ ‘ပို’ ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ကြည့်ရှုရမှာပါ…. ‘ပို’ ရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာ မွေးစားအဖေဖြစ်နေပါတယ်… ‘
ပို’ လသားအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့ရွာလေးကို တပ်ဖွဲ့တစ်ခုက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်…
ပို ရဲ့မိဘတွေဟာ ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ ပို့ ကို စွန့်ပစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်…ဒါက ပို ရဲ့ ဘသ ဇာတ်ကြောင်းပါ…
အခုချိန်မှာတော့ ဒေါင်းမင်းသားတစ်ယောက်ဟာ လက်နက်ဆန်းတစ်ခုကို တီထွင်ပြီးတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်နေပါပြီ…
ဒါကို ပို နဲ့ သူ့အဖွဲ့က တားဆီးဖို့အတွက် တာဝန်ကျလာပါပြီ…ဒီတော့ ပို တို့တွေ ဒေါင်းမင်းသားကို ဘယ်လိုတားဆီးကြမှာလဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ
ဆိုတာကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး grin emoticon
ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း ပထမကားလိုပဲ rating ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် (IMDb rating 7.3/10 )
Alexandra Gold Jourden Angelina Jolie April Hong Bridget Hoffman Conrad Vernon Dan O'Connor Danny McBride David Cross Dennis Haysbert Dustin Hoffman Edie Mirman Fred Tatasciore Gary Oldman Jack Black Jack Blessing Jackie Chan James Hong Jason Bertsch Jean-Claude Van Damme Jeremy Shipp Joseph Izzo Lauren Tom Lena Golia Liam Knight Lucy Liu Maury Sterling Michael DeMaio Michael Sorich Michelle Yeoh Mike Bell Nicholas Guest Paul Mazursky Peter Renaday Romy Rosemont Seth Rogen Shane Glick Stephen Kearin Victor Garber
Option 1 server.mfile.cloud 429 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 429 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 429 MB SD (480p)
Option4storage.msubmovie.com 429 MB SD (480p)
Option6server.mfile.cloud 1 GB HD (1080p)
Option 8 yuudrive.me 1 GB HD (1080p)
Option9storage.msubmovie.com 2.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 server.mfile.cloud 2.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
The Polar Express (2004) 2004